नेपाल परहरी … अब कपालको सेवामा
Aakar February 28, 2013
सँधै राजनितिको कुराले तात्ने सोसल नेटवर्कहरुमा २-३ दिन यता नेपाल प्रहरीको नयाँ हर्कतले तातेकोछ । अपराध नियन्त्रणको निहुँमा कपाल पाल्ने, मुन्द्रा लाउनेहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै कारवाही गर्न थालेकोछ । समाचार अनुसार “नियन्त्रणमा लिएकाहरुको नाम, थर, वतन, हुलिया, औठाछाप, फोटो राख्ने कार्य सुरु गरिएको छ। लामो अशोभनिय कपाल पालेकाको कपाल काटिएको छ तथा, अब उपरान्त त्यस्ता प्रकारको गतिविधि पहिरन र हुलिया बनाइ नहिँड्ने चेतावनी दिइकोछ।” नेपाल प्रहरीको ज्यादतिको विरोधमा फेसबुकका भित्ताहरु स्टाटस र फोटोहरुले भरिएकाछन् । प्रहरीको अभियान देखेर आफैँलाई लाज लागेकोछ । राजनैतिक दलहरुका वरपर रहेका डनहरु, अपराधिहरु खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेकाछन्, तर प्रहरीले अपराध नियन्त्रण गर्ने निहुँमा लामो कपाल भएका युवाहरुको कपाल काट्ने अभियान थालेकोछ । संगठित अपराधीहरुबाट जनताले दु:ख व्यहोरीरहेका बेला, जनताको ध्यान मोड्न र पपुलिस्ट हुन, एउटा “वाहियात” अभियान सञ्चालन गरिरहेछ । आफ्नो असक्षमता ढाक्न कपाल लामो भएका युवाहरु अपराधी हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न लागिपरेकाछन् । केही समय पहिले भारतमा, एकजनाले “चाउमिनका कारण बलत्कारको घटना घटेको हो” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रहरीले पनि त्यसै आशयको “लजिक” लगाइरहेछ । हत्या, लुटपाट अनि अपहरणको श्रृंखला रोकिएकोछैन तर युवाहरुले आफूखुशी कपाल पाल्न भने नपाउने भएकाछन्, मुन्द्रा लगाउन नपाउने भएकाछन् ।
“छोटो पहिरनका कारण बलत्कारको घटना बढेको भन्नु र कपाल लामो पालेका कारण लुटपाटको घटना बढेको” भन्नु एकै हो । कपाल लामो हुनु र लुटपाट हुनुको कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा त, नेपाल प्रहरीको फेसबुक र साइटले पनि भनिरहेकोछ । प्रहरीले लामो कपाल र अपराधको सम्बन्ध देखाउँदै, अभियान चलाएपछि नेपाल प्रहरीको फेसबुकमा आएका अपडेटहरु हेरेँ, त्यहाँ कुनै पनि अपराधीको कपाल लामो थिएन, बरु छोटो थियो । यसैबाट थाहा हुन्छ, अपराधसँग कपाल लामो र छोटो हुनुको सम्बन्ध छैन, नभए मैले प्रहरीको फेसबुकमा कपाल र मुन्द्रा लगाएकाहरुको फोटो देख्नुपर्ने हो । बरु छोटा कपाल भएका, राजनैतिक आवरणमा रहेका व्यक्तिहरुले सारा देश लुटिरहेकाछन्, तर उनीहरु त्यो देख्दैनन् तर कपाल पाल्नेलाई देखि सहँदैनन् ।
प्रहरीले नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको हनन गरेकोछ । नेपाल प्रहरीको यो हर्कतको जति नै भत्सर्ना गरेपनि कम नै हुन्छ । यस्ता वाहियात “लजिक” कसले ल्याउँदोहोला, प्रहरीमा? काठमाडौँको सडकहरुमा युवाहरुको कपाल काटिँदैगर्दा, प्रहरीहरु लामो कपाल भएका गुरु रविशंकरका कुराहरु सुन्दैथिए । कपाल लामो हुने व्यक्ति अपराधी हुन् भन्छन् भने, प्रहरीले सबैसँग समान व्यवहार नै गर्नुपर्ने हो । लामो कपाल भएका रविशंकर विद्वान हुन् भन्छ्न् भने एउटा केटोले कपाल पाल्दा उ कसरी अपराधी हुन्छ? उसले कसरी समाजको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउँछ ?
अपराध नियन्त्रण गर्ने निहुँमा जो कोहीलाई दु:ख दिनेकाम नेपाल प्रहरीले तत्काल बन्द गर्नु जरुरी छ । कपाल काट्ने अभियानमा लाग्नुको सट्टा प्रहरीले अन्य कुराहरुमा ध्यान दिए, समाज र देशको लागि धेरै राम्रो हुनेथियो ।
सबै फोटोहरु, ट्रोल नेपालबाट
Sangesh Shrestha February 28, 2013 at 8:53 PM
for cheap popularity such things happen, raid at lodge and hotels where couples are having good time saying it is improper ( but they are not doing in public), hair cut ( what will they when deep purple lands in KTM in couple of week or babaji sadhu who will arrive for shiva ratri... all baba's are criminals in eye of nepal police) it reminded of achyut krishna kharel's dingo boot cut abhiyan :P. it isatrend in police to do something different but in wrong way :). they did not realize that most of the philosopher have long hair. rabindra nath tagor , even our kavi siromani leknath poudel
Mahesh Sagar Khanal February 28, 2013 at 8:55 PM
रैती हरुले सासकले के भन्यो त्यही मान्ने त हो | त्यो भन्दा धेरै के पो हैसियत छ र हाम्रो
Kishor Kc March 1, 2013 at 4:17 PM
म लाई (मेरो ब्यक्तिगत धारणा ) भने यो कपाल र मुन्द्राको बहस गर्ने बेला हो जस्तो लाग्दैन। पाल्ने ले पाल्यो त्यो पनि केहि खराब थियेन।।।। अब काट्दा पनि केहि बिग्रेको पनि छैन । हुनत ब्याक्तिगत स्वास्थ र सुरक्षा (according to hygiene and safety) को हिसाब ले कपाल पल्नु राम्रो होइन।
Rabin Dhimal March 2, 2013 at 2:46 PM
is this Democracy of nepal WTF!!!!!!
long hair March 7, 2013 at 8:12 PM
balatkar, loot-maar, hatiya, thug-dakaiti garne haru lae samatna nasakne yesta bakamfusse police haru kai napayera sojha janta lae dukha dincha